अनानास र ह्यामको साथ स्पेल ब्यागल्स - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
अनानास र हेमको साथ स्पेल ब्यागल्स
कसले भन्छ जनतालाई गाह्रो छ ? पक्कै पनि यो कोही हो जोसँग थर्मोमिक्स® छैन किनभने हाम्रो मेसिन जनता उत्तम बाहिर आउँछ!!
आजको नुस्खा धेरै पत्रिका वा पुस्तकहरूमा देखेको हुन सक्छ। यद्यपि पक्कै पनि म लगायत एक भन्दा बढीले हामीलाई पकाउनु अघि आटा पकाउन फिर्ता फ्याँकिदिएका छन्। ठिक छ, मसँग राम्रो समाचार छ ... तिनीहरू बनाउन एकदमै सजिलो छन् र नतिजा एउटा प्वाल भएको रोटी हो कोमल र भूख.
ब्यागेलको बारेमा राम्रो चीजहरू मध्ये, यो बाहिर खडा छ कि आटा, एक पटक पकाएको र बेक गर्नु अघि, हुन सक्छ। congelar। म, आटा, सामान्यतया तिनीहरूलाई फ्रीजरमा3महिना भन्दा बढी छोड्दैन। त्यसोभए तिनीहरूलाई पुन: प्रयोग गर्न हामीले तिनीहरूलाई डिफ्रोस्ट गर्न, भर्न, बेक गर्न र खानको लागि तयार पार्नु पर्छ! निस्सन्देह यस तरिकाले तिनीहरूले हामीलाई समस्याबाट मुक्त गर्नेछन्!
तिनीहरू लागि आदर्श हो जन्मदिन पार्टीहरू, बच्चाहरु र वयस्कहरु। र, थप रूपमा, हामी तिनीहरूलाई हामीले चाहेको कुराले भर्न सक्छौं। आज मैले ह्याम र अनानास प्रयोग गरेको छु यद्यपि त्यहाँ अनन्त संयोजनहरू छन्।
1 अनानास र हेमको साथ स्पेल ब्यागल्स
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईं ब्याजेल ब्याटर स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ?
खाना पकाउने समय: 6M
२० थिचेको खमीरको g
१ ठूलो चम्चा डिहाइड्रेटेड ब्रोथ
२०० ग्राम हिसाबले पिठो
गहुँको पीठो को १ 50० ग्राम
Ted० g grated Emmental चीज
१ चम्मच मीठो पेपरिका
२ g ग्राम बटर, नरम
Aking बेकिंग सोडाको चम्मच
१ जर्दी, कुटे
पकाइएको ह्यामको s स्लाइसहरू
क्यान्ड अनानासको दुई टुक्रा
हामीले गिलासमा पानी, चिनी, खमीर र निर्जलित ब्रोथ राख्छौं। कार्यक्रम गर्छौं Minutes मिनेट, º०º, गति २.
हामी हिज्जे आटा को 100 ग्राम थप्नुहोस्। हामी समयमा मिश्रण गर्छौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
बाँकी हिज्जे र गहुँको पीठो, पेपरिका, मक्खन र पनीरको 50 ग्राम थप्नुहोस्। हामी प्रोग्रामिङ घुट्छौं २ मिनेट, गिलास बन्द, स्पाइक गति।
हामीले आटालाई बीकर खोलेर ४० मिनेटको लागि गिलास भित्र आराम दियौं।
हामी ट्रेमा चर्मपत्र कागजको पाना वा सिलिकॉनको पाना राख्छौं।
ह्यामलाई सानो स्ट्रिप्समा र अनानासलाई क्यूबमा काट्नुहोस्। हामीले बुकिङ गर्यौं।
एउटा ठूलो कन्टेनरमा, हामीले पानी र बाइकार्बोनेटलाई उमालेर तातोमा राख्छौं।
विश्राम समय पछि, हामी कार्यक्रम १ मिनेट, गिलास बन्द, स्पाइक गति। यसरी हामी आटाबाट हावा निकाल्छौं र यो तयार हुनेछ।
हामी आटालाई 8 बराबर भागहरूमा विभाजन गर्छौं। हामी तिनीहरूलाई डोनट्समा आकार दिन्छौं, पहिले एउटा बल र त्यसपछि बीचमा प्वाल बनाउँछौं।
उमालेको पानीमा 1 मिनेटको लागि बेगलहरू पकाउनुहोस्। हामीले र्याकमा नाली दियौं।
त्यसपछि हामीले तयार पारेको ट्रेमा राख्यौं।
हामी तिनीहरूलाई अण्डाको पहेँलो र भान्साको ब्रशको साथ पेन्ट गर्छौं।
हामीले राखेका ह्याम र अनानासले ब्यागेलहरू छोप्यौं।
बाँकी 25 ग्राम Emmental चीज माथि छर्क्नुहोस्।
हामी ओवनको मध्यम उचाइमा ट्रे परिचय गर्छौं र 15 मिनेटको लागि बेक गर्छौं।
हामी हटाउँछौं र सेवा गर्न तयार छौं।
थप जानकारी - टुना, मेयोनेज र सलादको साथ ब्यागल्स
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: एपेटाइजरहरू, सजिलो, आटा र रोटी, १ घण्टा भन्दा कम, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » आटा र रोटी » अनानास र हेमको साथ स्पेल ब्यागल्स
बाइकार्बोनेट पानी भनेको के हो? आटा पकाउन?
हो, बेकिंग सोडा त्यो हो जहाँ तपाईंले ब्यागलहरू पकाउन पर्छ। तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि तपाईंसँग सुपरमार्केटमा बाइकार्बोनेट छ वा यदि कुनामा फार्मेसीमा छैन भने!
हेलो, मैले हिर्काएको पिठो पढेको हो भने, म यसलाई हर्बल स्टोरहरूमा हुनेछ जस्तो लाग्छ, हैन? तर मलाई डिहाइड्रेटेड शोरबाको शंका पनि छ।
मारिया जोसेलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, अहिलेको लागि, हिज्जे वा हिज्जे पिठो स्वास्थ्य खाद्य स्टोर र स्वास्थ्य खाद्य स्टोरहरूमा मात्र उपलब्ध छ। यो दुर्लभ पीठो हो यद्यपि अस्टुरियसमा यसलाई राम्रोसँग चिनिन्छ।
डिहाइड्रेटेड ब्रोथ मासु हुनको लागि लायक छ, यद्यपि यो नुस्खामा एक तरकारीबाट बनेको छ ... र यदि तपाईंसँग यो छैन भने, तपाईं जहिले पनि यसलाई अवेक्रिम वा यस्तै किसिमको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
यो अन्तिम विकल्प भनेको मलाई कम्तिमा मनपर्दो हो त्यसैले यदि तपाईंले अहिलेसम्म यसलाई प्रयोग गर्नुभएन भने, म तपाईंलाई कडा प्रोत्साहन दिन्छ कि थर्मोमिक्सको साथ डिहाइड्रेटेड ब्रोथको राम्रो भाँडो तयार पार्न। मासु र तरकारी ब्रोथका लागि दुबै रेसिपीहरू छन् ...
अक्टोबर २,, २०११ मा Mª जोसेको प्रश्नको लागि।
क्यारेफोरमा उनीहरूले पिटेको पीठो छ, म यसलाई त्यहाँ खरीद गर्छु।
नमस्ते मायरा र स्वागत छ। २ शंका, थिच्दा खमीर अर्को प्रकारको लागि आदान प्रदान गर्न सकिन्छ? यदि होईन भने, तपाईं कहाँ किन्नुहुन्छ? र कसरी डिहाइड्रेटेड ब्रोथ बनाउने? एक अभिवादन र तपाईं व्यंजनहरु बीच देख्नुहुन्छ
चिसो खमीर चिसो क्षेत्रमा पाइन्छ, बुटरको साथसाथै, धेरै सुपरमार्केटहरूमा ... क्यारेफोर, मर्काडोना, कन्ज्युम ... यो एकदम सस्तो छ र आटालाई उत्तम खण्ड प्रदान गर्दछ।
मलाई लाग्छ कि Bagels को लागि नुस्खा अघि मैले डिहाइड्रेटेड शोरबाको लागि राख्नु पर्छ !! म यसलाई ला कुचारा क्याप्रिकोसाको लागि बनाउने विधिबाट बनाउछु ... यो यति सजिलो र यति उपयोगी छ कि म भाग्नु भन्दा अघि मैले अझ बढी बनाउने योजना गरिरहेछु!
कारमेन नीटो भन्यो
नमस्ते मायरा, म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु, डिहाइड्रेटेड ब्रोथ एभक्रिम हुन सक्छ? र स्पेलको आटा के हो, हामी यसलाई कहाँ किन्न सक्छौं?
कार्मेन निटोलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई आशा छ तपाईंले आपत्ति गर्नुहुन्न तर म तपाईंलाई मारिया होसेको प्रश्नमा पठाउँछु, जुन तपाईंको जस्तो हो।
यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने मलाई भन्नुहोस्, ठीक छ?
Carmen Bustamante प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
नमस्कार, म इक्वेडरमा बस्दछु र म तपाईंलाई कस्तो हुन्छ के भन्ने मलाई एक धारणा दिन चाहन्छु, मसँग केही स्प्यानिश कूकबुकहरू छन् जससँग स्पेल स्पेल रोटीहरू छन् तर त्यहाँ त्यो नाम छैन, यदि तपाईंले मलाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ भने। धन्यवाद
Carmen Bustamante लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई दुईवटा नाम मात्र थाहा छ; हिज्जे र हिज्जे म इन्टरनेट ब्राउज गर्दैछु र मैले जे पाएँ त्यसले मलाई मेक्सिकोमा पुर्‍याउँछ। त्यहाँ यसलाई हिज्जेको रूपमा पनि चिनिन्छ र तिनीहरूले यसलाई द ग्रेन कार्नर भनिने स्टोरमा किन्छन्, यो एक प्रकारको जडिबुटी हो तर विशाल हो।
जे भए पनि, यस प्रकारको पिठो धेरै व्यावासायिकिकृत हुँदैन, त्यसैले तपाईंले बेकरीमा जानु पर्छ जसले सिलियाकहरूका लागि विशेष उत्पादनहरू बनाउँदछ वा स्वास्थ्य खाद्य स्टोरहरू, जडीबुटीहरू ...
आँखा! स्पेल्टले ग्लुटनलाई नियन्त्रणमा राख्छ, तर यो गहुँप्रति असहिष्णुता भएका मानिसहरूका लागि आदर्श छ, सिलियाक नहुँदा।
मलाई थाहा छ मैले तपाईंलाई धेरै सहायता गरेको छैन तर म आशा गर्दछु कि यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
2 घटक जादुई केक